Apple inobvisa beta yekutanga yewatchOS 5 nekuda kwematambudziko panguva yekuvandudza | Ndinobva mac
Musi wa4 Chikumi, iyo yakamirirwa kwenguva refu WWDC 2018 yakaitwa.Pakange pasina kuziviswa kwemidziyo mitsva yeApple catalog, asi paive nenhau, uye dzakawanda, maererano neanoshanda masystem. Iyo Apple Watch inogamuchira inotevera vhezheni inonzi WatchOS 5.
Uye iro iro zuva rehurukuro, ivo vagadziri vatove neiyo yekutanga beta kurodha pasi. Nekudaro, chimwe chinhu hachina kushanda nemazvo uye panguva yacho hachiwanikwe kurodha pasi uye nekuzoiswa kwekupedzisira paApple smart wachi. Sezvakataurwa nevamwe vanogadzira, panguva yekumisikidzwa kweiyo yekutanga beta, makomputa avo akashandisirwa basa.
Naizvozvo, kana iwe uri mugadziri kana wakakwanisa kuiisa nedzimwe nzira - yeruzhinji beta ichaitwa kuti iwanikwe kune vashandisi pakupera kwemwedzi uno waChikumi-, uchakwanisa kuona kuti Apple inoratidza kuti beta iri "Haiwanikwe".
Uyezve, iwo meseji yavakatumira kubva kune vanogadzira peji ndeiyi inotevera: “WatchOS 1 beta 5 haiwanike kwenguva pfupi. Tiri kuongorora nyaya inoitika panguva yekuvandudza. Kana uine matambudziko, tapota nyorera AppleCare ».
Kwechinguva iyo Cupertino kambani haina kuratidza zuva rekuwanikwa mushure mekurangarira; Ivo vanofanirwa kuongorora uye kudzidza nyaya dzinouya neakaremara Apple Watch. Zvakare, yeuka kuti iyi nyowani vhezheni yewatchOS inosiya iyo 0 nhevedzano yeiyo smart wachi.
Zvino, mamwe ese emamodeli (akateedzana 1, akateedzana 2 uye akateedzana 3) achagamuchira kunatsiridza kunakidza: walkie-talkie basa; mitambo mitsva inowedzerwa kune iyo runyorwa; ichapa mukatiotomatiki kutanga kwekudzidzira kana tisingazviite nemaoko; tichava neSiri sphere neruzivo rwakawanda; pamwe nemukana wekugadzira zvinetswa zveboka uye nekukwanisa kukwikwidzana nevatinosangana navo, kunyangwe kuwana dhata pane kuvandudzwa kwavo vese kuburikidza nezviziviso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inobvisa beta yekutanga yeWatchOS 5 nekuda kwematambudziko panguva yekuvandudza
Vagadziri vanotyisidzira Apple kuti isaburitse mimwe mitambo ye macOS